Waxaa fiidnimadii xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay nin sida la sheegay ka tirsan Ururka Al Shabaab, oo soo xirtay dharka dumarka, indhahana shareernaa.
Ninkan oo bistoolad ku hubeysnaa, ayaa waxaa lagu soo qabtay hawlgal ay laamaha ammaanka ka sameeyeen Magaalada Muqdisho, waxaana la soo sheegayaa in baaris ay ku socoto.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Somaliya, C/kaamil Macalin Shukri, ayaa sheegay in ninkan uu xirnaa dhar waawayn, sidoo kalana uu bistoolad ku hubeysnaa, iyadoona uu ku eedeeyay inuu ka tirsan yahay Ururka Al Shabaab.
Afhayeenka, ayaa yiri “Waxaa la soo qabtay nin ka tirsan argagaxisada Al Shabaab oo xiran dharka dumarka, oo uu ku jiro indho shareer. Dhar waawayn ayuu xirnaa, bistooladna wuu waatay.”
Waxaa uu intaa ku daray “Hadda gacanta laamaha ammaanka ayuu ku jiraa, waxaan u soo bandhigi doonnaa Warbaahinta. Dadkan la soo qab qabanaayo waa dad tuhuno laga qabo.”
More in this category: Daawo Gudoomiyihii Hore Gobolka Banaadir Oo Afka Furaty Kana Hadalay Nidaam Xumuada Magaalada Muqdisho Taala (Video) »